Jaquet Droz - သီချင်းဆိုငှက်နာရီ - မြင့်မြတ်သောအိပ်မက်
ဇူလိုင်လ 23, 2018
လက်ပတ်နာရီပြုလုပ်သောအနုပညာလက်ရာ၊ နက်နဲသောအရာတခုနှင့်အံ့ rest ဖွယ်ကောင်းသောပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုတစ်မူထူးခြားသည့်အလင်းပြန်ပေါ်လာစေခဲ့သည်။ objet d'art.
Jaquet Droz ငှက်ပွင့် PENDULUM နာရီသီဆို
Jaquet Drot ၏ Singing Bird Clock နာရီသည်ထူးခြားသောအရာဝတ္ထုဖြစ်ပြီးသမိုင်းကိုနက်နဲသောအရာဖြစ်ပေသည်။
နပိုလီယံ ၁ အတွက် Wurtemberg ၏အနာဂတ်ကက်သရင်း Bonaparte အတွက်ကက်သရင်း Bonaparte အတွက်လက်ဆောင်အဖြစ်တည်ဆောက်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်မှာသူသည်brotherကရာဇ်၏အစ်ကိုနှင့်လက်ထပ်ပြီးနောက် ၁၉၈၃ တွင်ရုတ်တရက်ပေါ်လာသည်အထိ Musee d'Horlogerie du Locle ၌ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့သည်။
တစ် ဦး ကစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဇာတ်လမ်း။
အင်္ဂလိပ်စာစုဆောင်းသူကပြတိုက်ကိုအပ်နှင်းခဲ့တယ်။ သို့သော်သူမတိုင်မီ ၁၉၁၇ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် Lucerne မှရှေးဟောင်းကုန်သည်တစ် ဦး သည်ရောင်းချရန်ပြင်ဆင်ထားသည့်ထိုအချိန်နာရီကိုမသိရှိခဲ့ပါ။
မတိုင်မီကသတ်သတ်မှတ်မှတ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုသည် ၄ ​​င်း၏destကရာဇ်ကြမ္မာကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ “ Napoléon I မှ Wurtemberg မှမင်းသမီးအားပေးအပ်သည့် Empire Clock (…)” “ Pendule Empire (…) သည်Napoléon Ier à une princesse wurtembergeoise” ၏ကမ်းလှမ်းချက်ဖြစ်သည်].
၎င်းတီထွင်မှု၏စစ်မှန်မှုကိုမည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူသေချာသည်မှာသေချာပါသည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းကိုပြုလုပ်သူ“ P Jaquet Droz A La Chaux de Fonds” ၏လက်ဖြင့်လက်မှတ်ရေးထိုးထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်နာရီ၏နောက်ကျောပြားတွင်“ P. Jaquet Droz တစ် ဦး က La Chaux က de Fonds "။
© Association Automates & Merveilles
ထို့ကြောင့်၎င်း၏ 280 ၏အခါသမယတွင်th နှစ်ပတ်လည်အထိမ်းအမှတ် Maison Jaquet Droz သည် The Singing Bird Clock နာရီအား Association Automates & Merveilles ၏အဆင့်မြင့်ပညာရှင်များအဖွဲ့ကိုပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။
ဒီနေရာတွင် dendrochronology ဟုခေါ်သည့်အထူးနည်းစနစ် (သစ်နှင့်သစ်ပင်စည်များတွင်နှစ်စဉ်ကြီးထွားမှုကွင်း၏ထူးခြားသောပုံစံများကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်သိပ္ပံသို့မဟုတ်ချိန်းတွေ့ခြင်းဖြစ်ရပ်များ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲမှုနှင့်ရှေးဟောင်းသုတေသနဆိုင်ရာရှေးဟောင်းသုတေသနဆိုင်ရာနည်းစနစ်များ) ဖြင့်၎င်းသည်၎င်းကိုအပင်များဖြင့်ပြုလုပ်သည်ကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့သည်။ သစ်သားသည် ၁၇၅၄ ခုနှစ်ဝန်းကျင်တွင်ကျဆင်းသွားပြီး Pierre Jaquet-Droz (1754-1721) ၏လုပ်ဆောင်မှုနှင့်လုံးဝကိုက်ညီသည်။
သီဆိုသောငှက်များ - ၁၈ ရာစုအတွင်းကအရာဝတ္ထုများ။
La Chaux-de-Fonds မှလက်ပတ်နာရီသည်ယနေ့ခေတ်တွင်အောင်မြင်သောကျွမ်းကျင်သောလက်ပတ်နာရီအဖြစ်လူသိများသည်။ အရှုပ်ထွေးဆုံးအိတ်ဆောင်နာရီမှသည်သူတီထွင်ခဲ့သောအလိုအလျောက်စက်များအထိ။
သီဆိုသောငှက်များသည်သူ၏ထူးခြားချက်များစွာထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤကာတွန်းဖန်တီးမှုတွင်သက်ရှိများအရွယ်ရှိငှက်များပါ ၀ င်ပြီးအလှဆင်ထားသောလှောင်အိမ်များတွင်တေးသံအမျိုးမျိုးကိုထုတ်လုပ်သည်။ ၁၈ ရာစုနှင့် ၁၉ ရာစု၏ဖက်ရှင်များနှင့်အညီဤငှက်များသည် Canary များမကြာခဏဖြစ်ခဲ့ကြသည် serins များ ပြင်သစ်ဘာသာဖြင့် (ထိုသူတို့၏အမည်“ serinettes” မှ) ။
သဘာဝတရား၏အထွတ်အထိပ်ဖြစ်သောဉာဏ်အလင်းသည်ငှက်များကိုစွဲလမ်းခဲ့သည်။ Pierre Jaquet-Droz သည်သူတို့၏နွေရာသီနှင့်နွေရာသီများတွင်သူတို့၏နူးညံ့သိမ်မွေ့သောတေးသီချင်းများကိုသဘောကျနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသည်မှာသေချာသည်။ သို့သော်ငယ်ရွယ်သောကင်းစောင့်အားလုံး၏အထက်တွင်ခံစားချက်ရှိပြီးအချိန်ကာလ၏စိတ်ကိုဖမ်းယူနိုင်ခဲ့သည်။
ဤကာလအတောအတွင်းသီဆိုသောငှက်များသည်စားပွဲခုံများ၊ နှာခေါင်းအိတ်များ၊ urns များ၊ ငှက်အိတ်များနှင့်အိတ်ဆောင်နာရီများကိုအလှဆင်ခဲ့ကြသည်။ သူ၏စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖန်တီးမှုများကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်သေးငယ်သောအလိုအလျောက်အော်တိုတီတီများဖြင့်ကာတွန်းကားကာမှဖန်းတီးသောဖောင်တိန်များနှင့်ဆလင်ဒါပစ္စတင်စနစ်များနှင့်ပေါင်းစပ်ကာခမ်းနားထည်ဝါသောငှက်များကိုပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်ခဲ့သည်။
Singing Bird Clock: လက်မှုပညာ၏အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။
Jaquet Droz 'Singing Bird Clock နာရီသည်စစ်မှန်သောလက်ရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လက်ပတ်နာရီနှင့်စည်းကမ်းအမျိုးမျိုး၌ထူးချွန်မှုကိုပြန်လည်ပေါင်းစည်းနိုင်ခဲ့သည်။ မြင့်မားသောအထူးကျွမ်းကျင်သည့်လက်မှုပညာသည်များသည်အတူတကွအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပြီးနာရီလှုပ်ရှားမှုများ၊ ဂီတနှင့်အလိုအလျောက်များကိုဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း၊ တည်ဆောက်ခြင်း၊
The Singing Bird Clock နာရီတွင်၊ fusee နှစ်ဆနှင့် chains (၁.၈၀ မီတာ) ရှိသော power motor တစ်ခုရှိသည်။ နာရီ၏ရွေ့လျားမှုတွင်၎င်းသည်သရဖူဘီးမှလွတ်မြောက်ခြင်းနှင့်နာရီနှင့်လေးနာရီနာရီများကိုညက်ညောစေသည်။
အဆိုပါသီဆိုငှက်ဝန်ကြီးအဖွဲ့ထိပ်ပေါ်မှာလှောင်အိမ်၌တည်ရှိ၏။ ဒါဟာတဆယ်ပုလွေအပေါ်ခြောက်လကွဲပြားခြားနားသောတီးလုံးကစားသည်။ ထိုတေးသံစဉ်အတွင်းငှက်သည်နှုတ်သီးကိုဖွင့်စဉ်အမြီးမွှေးများနှင့်ဤအလိုအလျောက်စက်အမျိုးအစားအတွက်အလွန်ရှားပါးစွာ - ရင်ဘတ်ပေါ်၌အစက်အပြောက်ပေါ်သို့လှည့်ပတ်နေသည်။
ယနေ့တွင်ယခုတည်ဆောက်ပြီးစီးသည့်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းသည်ဤပထမမူရင်းပရိဘောဂတွင်တည်ဆောက်ခဲ့သောလှုပ်ရှားမှု၊ ငှက်နှင့်ကြေးဝါအစိတ်အပိုင်းများအပြင်ပါရမီရှင်ဗီဒို၏သက်တမ်းကိုသက်တမ်းတိုးစေခဲ့သည်။ Empire Retour d'Egypte မှမှုတ်သွင်းထားသောကြေးဝါအစိတ်အပိုင်းများ၊ ကြယ်များ၊ palmettes နှင့် fusaroles များသည်နာရီများစွာ၏သက်တမ်းကိုအတည်ပြုသည်။ ၎င်းကို၎င်း၏ထင်ရှားကျော်ကြားသောပိုင်ရှင်များမှနေ့စဉ် ၀ န်ကြီးဌာနသို့ပြောင်းလဲမှုများမှတစ်ဆင့်အသစ်ပြုပြင်သည်။ CC
“ Singing Bird Clock” သည်လက်ရှိတွင် La Chaux-de-Fonds ရှိMusée International d'Horlogerie ရှိ La Chaux-de-Fonds ရှိစက်တင်ဘာလ ၄ ရက်မှအောက်တိုဘာ ၂၈ ရက်အထိကျင်းပသော“ Rêves en trois temps” ပြပွဲ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Neuchâtelရှိ Musee d'Art et d'Histoire သည်၎င်းသည် Musee d'Horlogerie du Locle - Château des Monts သို့မပြန်မီ။
နို ၀ င်ဘာလမှစတင်ခဲ့သောMusée d'Horlogerie du Locle တွင်ထိန်းသိမ်းထားမည့်နာရီကိုလုံးဝပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းများကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပြီး ensemble သည်ဆက်လက်အလုပ်လုပ်နေသော်လည်း၎င်းသည်၎င်း၏သက်တမ်းကိုအာမခံရန်အတွက်ရှားရှားပါးပါးအချိန်နှင့်တင်းကျပ်သောစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုအောက်တွင်သာအသုံးပြုလိမ့်မည်။ နှစ်ပေါင်း ၂၈၀ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အဘို့, ဒီအဖိုးတန် Canary ၏တေးသံဖြင့် Jaquet Droz ၏အမွေအနှစ်အလှဆုံးအခမ်းအနားဖြစ်သည်။
Tags:အလိုအလျောက် • နာရီ • Jaquet Droz • Objets d'Art
မှတ်ချက်0ခုJaquet Droz - သီချင်းဆိုသည့်ငှက်နာရီ"